Carbon na-anọpụ iche na-efe efe - Lufthansa Compensaid dị ugbu a maka ndị ahịa ụlọ ọrụ
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi Njem na Germany » Carbon na-anọpụ iche na-efe efe - Lufthansa Compensaid dị ugbu a maka ndị ahịa ụlọ ọrụ
Lufthansa na-eme ka ikuku na-efe efe ghara ịnwe ike maka ndị njem n'otu n'otu
Ruo ọtụtụ iri afọ, Lufthansa Group etinyela aka na iwu ụlọ ọrụ na-akwado ma na-arụ ọrụ
Ugbu a ụlọ ọrụ nwekwara ike iji Compensaid maka ndị ọrụ ha 'njem azụmahịa
Onye ahịa mbụ bụ onye na-eweta mkpuchi AXA Deutschland
N'ihi Compensaid, otutu dijitalụ dijitalụ na-akwụ ụgwọ ikpo okwu nke Lutù Lufthansa, ikuku carbon na-efe efe ga-ekwe omume maka ndị njem ọ bụla. Ugbu a ụlọ ọrụ nwekwara ike iji nhọrọ a, n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe, maka njem azụmahịa nke ndị ọrụ ha.
Na “Compensaid Corporate Programme” ụlọ ọrụ ndị ahịa nwere ohere iji, dịka ọmụmaatụ, Sustainable Aviation Fuel (SAF) maka njem ụgbọ elu ha. Na SAF ha nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọkụkụ CO2 mepụtara mgbe ha na-efe efe. Ihe omume a na enye ndi ulo oru ohere iwepu ugbo elu ha nile - ma ha na ndi Lufthansa ma obu ndi ugbo elu ndi ozo.
Onye ahịa mbụ bụ onye na-eweta mkpuchi AXA Deutschland. Companylọ ọrụ ahụ ga-ewepụ njem ụgbọelu metụtara azụmaahịa ya maka oge izizi afọ atọ.
“Flyinggbọelu na-anọpụ iche ga-ekwe omume ugbu a. Na Compensaid, anyị nwere ngwa ọrụ dị ike maka ịnye ndị ahịa anyị ihe na-adọrọ mmasị ma na-agbanwe agbanwe. Setchụpụ bụ akụkụ nke atụmatụ anyị iji belata ihe ọkụkụ CO2 na ọkara site na 2 wee nweta akara ụkwụ carbon na-anọpụ iche na 2030. Obi dị anyị ụtọ na AXA Deutschland anyị nwetara onye anyị na ya ga-esonye na-ekerịta ọhụụ anyị maka ịgagharị agagharị, ”ka Christina Foerster, Lufthansa na-akọwa. Otu Onye isi Ala maka Onye Ahịa, IT & Ibu Ọrụ.
A na-akwụ ụgwọ ụgwọ njem ụgbọelu na Compensa ma ọ bụ site na iji SAF, nkwado nke ọrụ nchekwa ihu igwe, ma ọ bụ nchikota nhọrọ abụọ ahụ. Ihe nkwụsị nke AXA Deutschland na-amalite site na 15 pasent site na SAF na 85 pasent site na ọrụ nchedo ihu igwe ahọpụtara. Nke a na - eweta nnọpụiche zuru oke nke CO2 niile.
Omni Hotels na Resorts ọrụ biputere 248 pasent na 2021
FlyArystan malitere ọrụ mba niile na Georgia